Home Wararka Ciidamada Itoobiya oo maanta laayey shacab Soomaaliyeed
Ciidamada Itoobiya oo maanta laayey shacab Soomaaliyeed
Wararka naga soo gaaraya degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in maanta halkaasi ay ka dhaceen rabasho ay ku dhinteen dad Shacab ah oo Banaanbax sameynaayay.
Nabadoon Cali Yacquub Nuur oo ka mid ah waxgaradka degmada Baardheere ayaa Risaala u sheegay in ugu yaraan 4 qof ay dhinteen 6 kalena uu dhaawac soo gaaray ka dib markii ciidanka Itoobiya ay rasaas ku fureen dad kasoo horjeeday Gudoomiye cusub oo loo soo Magacaabay degmada Baardheere.
Waxaa uu sheegay in ninka cusub ee lasoo Magacaabay Ciidanka Itoobiyaan ay taageerayaan, islamarkaana dadkii kasoo horjeeday la laayay.
Nabaddoonka ayaa dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ugu baaqay in wax laga qabto dhibaatada heysta ee ka timid Ciidanka dowaldda Itoobiya qeybtooda ku sugan degmada Baardheere.
Halkaan ka dhagayso goobjooge la wareeystay
dhib wareeysi goobjooge
Previous articleFarmaajo oo markale codsaday in uu u safro dalka Jabuuti. Muxuu soo kordhinayaa safar kale iyada oo aan caqligiisa isbadalin?
Next articleDeeganada Sool, Sanaag and Ceyn oo si toos ah ugu biiraya maamulka Deeganka Soomaalida ee Itoobiya. Maxaa isbadalay? (Video)
Wasiir Janan oo fartiin adag u diray MW Farmaajo